FUNNY | Rochak Khabar
कण्डमको प्रयोग गर्ने हरुलाई दुखको कुरा कण्डम प्रयोगको लाभ बारे मानिसहरु धेरैलाई थाहा होला तर यसका केही साइड इफेक्ट्स पनि छन् जसको ज्ञान थोरैलाई मात्र छ होला । कण्डमले तपाईंको सेक्स लाइफलाई प्रभावित त गर्छ नै यसले तपाईंलाई यौन सम्बन्धि रोगको पनि शिकार बनाउन सक्छ । आउनुहोस्, कण्डमका साइड इफेक्ट्...
फेसबुक प्रोफाइलबाट यी ११ कुराहरु हटाई हाल्नुस , नत्र पछुताउनु पर्ला सोसल नेटवर्किङ साइट फेसबुक हाम्रो जीवनको अभिन्न अंग बनिसकेको छ । तर यो कहिले काँही हाम्रो लागि समस्याा पनि बन्नसक्छ । हाम्रो नीजि जानकारी फेसबुकमा हुने भएका कारण मानिसहरुले यसको गलत फाइदा उठाउने गर्दछन् । यस्तोमा हामी तपाईंलाई फेसबुकमा हाल्न नहुने ११ कुरा...
5 Jul, 12:13 PM
6 Jul, 02:05 AM
किस गर्दा बिर्सिनै नहुने ५ कुरा मायाँ अभिव्यक्त गर्ने एउटा तरिका हो किस । पछिल्लो पुस्तामा यो निकै फस्टाएको छ । तर यसमा केही टिप्सहरु ख्याल गर्न सकेन भने मायामा चिसो लाग्न सक्छ । त्यसैले यी कुराहरु बिर्सेर पनि भुल्नु हुदैन ।
2 Jul, 03:29 AM
यी हुन महिला हरु का सबै भन्दा सम्बेदनशील र यौनिक पार्ट पुरुषहरु सँधै सोचिरहन्छन् महिलाको सबैभन्दा संवेदनशील भाग कुन् ? अधिकाँश पुरुषको आँखा पर्ने अंगहरु बाहेक अन्य अंगहरु पनि यौनिकरुपमा निक्कै संवेदनशील मानिन्छन् । कतिपय अंगमा पुरुषको आँखा परि हाल्छ भने कतिपय अंगमा भने छोएपछि यौनिक उत्तेजना बढ्ने हुन्छ । यस्त...
3 Jul, 03:09 AM
स्वास्थ्य नै धन हो भन्ने कुरा हामी सबैले बुझेकै छौ । त्यसैले आजकाल हामी खाना प्रति निकै सचेत हुने गर्दछौ । हामीले खाने खानाका विषयमा सचेत हुनु जरूरी पनि छ । हामीले खाने कुनै-कुनै खाना साथमा खाँदा हामीलाई फाइदा भन्दा बेफाइदा बढी हुन्छ । हामीले खाने कुनै खा...
6 Jul, 02:19 AM
श्रीमतीचाहिँ किन यति खतरनाक हुन्छन् ?- jokes शेरे भगवान्सँग ।
शेरे : भगवान्, केटीहरू यति सुन्दर, सुशील अनि शान्त हुन्छन् तर श्रीमतीचाहिँ किन यति खतरनाक हुन्छन् ?
भगवान् : किनभने केटीहरूलाई म बनाउँछु अनि श्रीमतीचाहिँ तिमीहरू बनाउँछौ ।
16 Sep, 03:14 AM
तरकारीवाली अचानक पत्रकारसंग पोईल जादाँ अर्को हंगामा (भिडियो) तरकारीवालीको नामले एकाएक चर्चा बटुलेको महिना नबित्दै अचानक पत्रकारसंग पोईल जादाँ अर्को हंगामा भएको छ । उनको बुवा र बिहे गर्न तयार केटा यतिबेला तनावमा छन । त्यति मात्र होईन उनलाई पच्छाईरहेक चायवाला समेत अक्क न बक्क बनेका छन यतिबेला ।तर यो सबै दृष्य भने नया...
22 Dec, 10:23 AM
भनिन्छ, महिलाको हृदय कोमल हुन्छ । तर अष्ट्रियामा एक महिलाले क्रुरताको नयाँ उदाहरण प्रस्तुत गरेकी छिन् । उनले आफ्नी आमा, दाजु, तीन छोराछोरी तथा दुई कुकुरको हत्या गरिन् । हत्यापछि आफ्नो प्रेमीलाई बोलाएर अर्को कोठामा यौनसम्पर्क गरिन् र अन्त्यमा आत्महत्या गरि...
नेपाली चेली तेरिया मगरले आज फेरि भारतमा मच्चाइन हंगामा , (भिडियो हेर्नुस)
नेपाली चेली तेरिया मगर फेरी भारतमा हंगामा मच्चाउदै… धमकेदार हंगामा मच्चाउने डान्स (भिडियो हेर्नुहोस)
4 Jan, 03:55 AM
ढाकामा चरमपन्थी आक्रमणः बन्धक बनाइएका १७ विदेशीसहित २० को हत्या
ढाकाको गुलशन इलाकामा रहेको अर्टिशन बेकसरी क्याफेमा बन्दुकधारीले शुक्रबार साँझ आक्रमण गरेका थिए । ७-८ जनाको समूहमा रहेका उनीहरुले क्याफेमा रहेकाहरुलाई बन्धक बनाए ।जसमध्ये २० जनाको विभत्स तरिकाले हत्या भएको छ । बंगलादेशको सेनाका प्रवक्ताले बताए अनुसार अधिका...
2 Jul, 05:52 PM
PM KP Oli Address at Parliament
The Parliament on Saturday endorsed the Appropriation Bill which allocates shares of the budget to various ministries and other bodies to spend in the next fiscal year.
10 Jul, 02:55 AM
यी १० FB प्रोफाइल पिक्चर हरु लाइ देखेर तपाई हरु पनि यिनी हरु को creativity को फ्यान हुनु हुनेछ फेसबुक प्रयोग गर्ने हरु सबै जना ले कुनै न कुनै प्रोफाइल कबर पिक्चर लगाउने गर्छौ , अधिकतर हरु को यी पिक्स हरु साधारण हुन्छन तर केहि व्यक्ति हरु जसको फोटोसप स्किल राम्रो हुन्छ र दिमागले creative हुन्छन , उनीहरु को प्रोफाइल अरुको भन्दा अलि भिन्नै प्रकार का...
17 Jul, 01:12 PM